Wai mon's Comments - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Wai mon's Comments
← Back to wai mon's Page
5:09pm အချိန်September 6, 2012, တွင်စံပယ် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မမ ညီမ အလည်လာသွားပါတယ် ရှင့်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ရှင့်။ 7:15pm အချိန်August 3, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမရေ အစ်ကိုအလည်လာသွားပါတယ်။ အိမ်ရှင်တွေ ခရီးလွန်နေပုံရတယ် ဘယ်သူမှမရှိဘူး.။ လက်ဆောင်လည်းပို့ခဲ့ပါတယ်ညီမ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..။ Friends18.com Flowers Scraps
1:44am အချိန်July 15, 2012, တွင်thet naing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမအတိုင်း အကောင်းဆုံး လိုက်နာနိုင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ၊ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝနိုင်ပါစေလို့ ...။ 3:14pm အချိန်June 27, 2012, တွင်မတင်တင်မိုး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမရေ လာလည်သွားတယ်နော်။ 4:19pm အချိန်June 25, 2012, တွင်ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကျွန်တော် လာရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ၊ တရားတော်များကိုလည်း ဒီထက်မက သိနိုင်မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်သူဖြစ်ပါစေနော်။ အမြဲတမ်းခင်မင်လျက်ပါခင်ဗျာ.... .....။ Friends18.com Hi Hello Scraps
1:06pm အချိန်June 15, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မိတ်ဆွေရေ ရှမ်းပြည် မူဆယ်အလှူရက်ကို (၁၉.၈.၂၀၁၂)ရက်။ တနဂ်နွေနေ့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။ အလှူငွေကို (၁၀.၈.၂၀၁၂)ရက်၊ သောကြာနေ့ အထိ နောက်ဆုံးထား လွှဲပို့လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ 4:18pm အချိန်May 10, 2012, တွင်ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ.ပါ သမီးလေးရယ် -
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်- ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေကွယ် 6:04pm အချိန်April 24, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
thein wai ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
1. သကြားနှင့်ဆား စားမှသိ ( ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး )
2. ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ နှင့် အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော
3. "ဘာသာ သာသနာအစွပ်စွဲခံရမှု နှင့် ပါတ်သတ်၍ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏အကြံပြုတင်ပြလွှာ" (ဓမ္မသတင်းလွှာ)
4. "ဘ၀ကောင်းတစ်ခု ရချင်ရင်ငါးပါးသီလလုံခြုံမှဖြစ်မယ်"
5. သြကာသနဲ့ဘာကြောင့် ကန်တော့ရသလဲ
6. အိမ်တွင်း သာသနာ ပြုပေးကြပါ
7. (၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း
8. တန်ခိုးကြီးဘုရားကို ဖူးဖို့သွားရင် အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရား အားနာစရာကြီး။
10. ဥပုသ်သီလ ဆိုသည်မှာ
11. မီးလွတ်ကျင့်စဉ်တဲ့ ?
12. "ကိုရင်လေး ပေမယ့် အထင်မသေးစေချင်လို့ပါ"
14. အူမနှင့် သီလ
15. လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ဘာလဲ။
16. “အ၀ီစိငရဲသို့မလွတ်တန်းဆွဲချမည့် အကုသိုလ်ကံ(၆)မျိုး”
17. "အရိယာ လား ? မသိတာ လား ? "
18. သီလဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ
19. ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ
20. သေရမှာကြောက်သူ (၄) ဦး နှင်. သေရမှာ မကြောက်သူ (၄) ဦး
Top News · Everything Soe Gyi shared thein wai's blog post on Facebookကုသိုလ်ပြုခြင်းနှင့်အတူ ဆုတောင်းချွတ်ချော်မှုများ။2 hours agoSoe Gyi liked thein wai's blog post 'ကုသိုလ်ပြုခြင်းနှင့်အတူ ဆုတောင်းချွတ်ချော်မှုများ။'2 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookလေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း2 hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း'2 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebook၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈2 hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post '၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈'2 hours agoSoe Gyi shared dimplemit's blog post on Facebookအနတ္တလက္ခဏသုတ်ကိုစိစစ်ခြင်း2 hours agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'အနတ္တလက္ခဏသုတ်ကိုစိစစ်ခြင်း'2 hours agoSoe Gyi liked dimplemit's blog post 'Precious words'2 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookကံစီမံခြင်း မခံရလေအောင်…3 hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ကံစီမံခြင်း မခံရလေအောင်…'3 hours ago၄၄၂ဇော်နိုင် commented on မူကြိုဆရာ's blog post '၁၅၀၀ နဲ့ ၅၂၈'"မှတ်သွားပါတယ်ဗျာ"4 hours ago More... RSS